Napoli oo Rigoorayaal Kooxda Juventus uga Qaaday Super Cup-ka Dalka Talyaaniga“SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Napoli oo Rigoorayaal Kooxda Juventus uga Qaaday Super Cup-ka Dalka Talyaaniga“SAWIRRO”
Kooxda Napoli ayaa ku guuleysatay Super Cup-ka dalka talyaaniga,ka dib markii ay rigoorayaal 6-5 ah uga badisay kooxda Juventus.
Koobkan ayaa waxaa ciyaaro kooxda ku guuleysato koobka talyaaniga ee Serie A-da iyo kooxda ku guuleysato koobka Coppa italia ee dalka talyaaniga.
Ciyaartan u dhaxeysay kooxaha Juventus iyo Napoli ayaa waxa ay ka dhacday garoonka Jassim Bin Hamad Stadium oo ku yaalo caasimada dalka Qatar ee Dooxa.
Koobkan ayaa ahaa koobkii 27-aad ee Super Cup-ka dalka talyaaniga.
Kooxda Juventus ayaa goolka la hor martay,waxaana shanaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Carlos Tevez,sidasi ayaan lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Gonzalo Higuain ayaa daqiiqadii 68-aad ee ciyaarta goolka barbardhaca u dhaliyay kooxda Napoli,sidasi ayeyna ku dhamaatay waqtigii loogu tala galay ciyaarta,waxaana lagu daray 30-daqiiqo oo dheeraad ah.
Ciyaaryahan Carlos Tevez ayaa bilowgii qeybtii labaad ee waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Juventus.
Ciyaaryahan Gonzalo Higuain ayaa dhamaadkii qeybtii labaad ee waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta goolka labaad ee barbardhaca u dhaliyay kooxda Napoli.
Ciyaarta ayaa waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta ku dhamaatay barbardhac 2-2 ah,waxana lagu kala baxay rigoorayaal ama gool ku laad.
Gool hayaha kooxda Juventus Gianluigi Buffon ayaa badbaadiyay sedax rigoore,laakin ma aysan ka faa’ideysan ciyaartoyda kooxda Juventus.
Gool hayaha kooxda Napoli Rafael Cabral ayaa rigoorada ay kooxdiisa koobka ku qaaday ka qabtay ciyaaryahan Simone Padoin.
Kooxda Napoli ayaa ku guuleysatay markii labaad taariikhda koobka Super Cup-ka dalka talyaaniga.